B270 Hwindo - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 10 Products for B270 Hwindo)
Zinc Selenide ZnSe mahwindo
Zinc selenide hwindo rine hutachiona bhendi rakapamhamha kupfuura silicon uye germanium. Pamwe pamwe nekudzikira kwayo kwakadzika muchikamu chitsvuku cheiyo inoonekwa spectrum, zinc selenide yakanakira masystem emagetsi anosanganisa 10.6 µm CO2 laser ine 633 nm HeNe alignment laser. Magadzirirwo: Chinyorwa: Zinc...
Nemaitiro avo epamusoro ehunyanzvi uye emakemikari, windows sapphire inogona kuwanikwa mukushandisa mukati meiyo yese optical chikamu pamwe nemunda wekuyera uye yekuongorora chishandiso. Izvi zvinoshandiswa zvinogona kusanganisira: murabhoritari basa mu microscopy maindasitiri mafomu munzvimbo dzine njodzi runway...
AR Coated Borosilicate hwindo
Windows yeBorosilicate yakanakira tembiricha yakakwira uye nharaunda mafomu ekushandisa. AR Kuchengeta UV, Visible, uye NIR kunowanikwa. Magadzirirwo: Chinyorwa: Borosilicate Dhayamita: 1mm ~ 300mm Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba Kushivirira: +/- 0.1mm Pamusoro pemhando: 40/20, 60/40 Bvisa Aperture:>...
AR yakavharwa mahwindo eSafiri
Sapphire Windows inogadzirwa kubva kune imwe chete yekristaro yesafiri AI2O3, mukana wayo wakanyanya kuomarara kwepamusoro, kupisa kwakanyanya kupisa, kwakanyanya dielectric kuramba uye kuramba kune akajairika makemikari acids uye alkalis. Isu tinopa AR Yakaputirwa yeUV, Inoonekwa, uye NIR. Magadzirirwo: Chinyorwa:...
B270 Hwindo ZnSe Hwindo Optic Hwindo Girazi Hwindo B270 Girazi Germanium Hwindo Hwindo Magnifaya Sapphire Mahwindo